Seoul + Nami KH - 6000
ကိုးရီးယား သွားချင်သော်လည်း အချိန်မရသူများအတွက် ကိုးရီးယား ရက်တို ခရီး ဖြစ်ပြီး ဆိုးလ်မြို့ နှင့်အနီးအနား ပတ်လည်အားလည်ပတ်သော ရှိအထင်ကရနေရာများအားလည်ပတ်သော ခရီးစ်ြသည်။
Day : 1 Depature to Seoul (Dinner on flight)
ည လေယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မှ ဆိုးလ်မြို့ သို့ ထွက်ခွာပြီး နောက်နေ့ နံနက် ၅နာရီခန့်တွင် ဆိုးလ်မြို သို့ ရောက်ရှိပါမည်။ လေယာဉ်ပေါ်တွင် ညလည်စာနှင့်နံနက်စောစော နံနက်စာကျွေးပါမည်။
Day :2Seoul & Option to choose (light breakfast, Lunch & Dinner)
လေဆိပ်မှ ဧလမ်းညွန်မှကြိုဆိုကာ နံနက်စာသွားရောက်သုံးဆောင်ကြပြီးလျှင်
Option B - Paju - Sokcho တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းကြားရှိ ပါဂျူသို့သွားကာ လမ်းတွင် Heyri Art Village လေးတွင်ဓာတ်ပုံများရိုက်ကြပြီး Sokcho မီးပြတိုက်သို့ လည်းလည်ပတ်ပါမည်။ ပါဂျူ ရှိ Premium outlet တွင်လည်းဈေးဝယ်ကြပါမည်။
Option C – Edelweiss Swiss Park – Nami Island (Lunch, Dinner) Swizerland နိုင်ငံပုံစံ ဆောက်လုပ်ထားသော ပန်းခြံလေးတွင် ဓာတ်ပုံများရိုက်ကြပါမည်။ ပြီးလျှင် ရာသီအလိုက်အရောင်ပြောင်းသော နာမီကျွန်းလေးသို့ သင်္ဘောဖြင့်သွားရောက်လည်ပတ် ဓာတ်ပုံများရိုက်ကြပါမည်။ ပြီးလျှင် တဘက်ကမ်းသို့ပြန်ကာ ဟိုတယ်တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်
Option D – Nami Island (Lunch, Dinner) alive museum ရာသီအလိုက်အရောင်ပြောင်းသော နာမီကျွန်းလေးသို့ သင်္ဘောဖြင့်သွားရောက်လည်ပတ် ဓာတ်ပုံများရိုက်ကြ ပြီးလျှင် တဘက်ကမ်းသို့ပြန်ကာ ကိုးရီးယား ရဲ့ 3D alive museum မှာဆက်ပြီး ဓာတ်ပုံများရိုက်ကြပါမယ်။
Day :3Seoul & Option to choose (Breakfast, Lunch & Dinner)
Option C - ဂွမ်ဘွတ်ဂွန်နန်းတော် နှင့် National Folk museum တို့တွင်ကြည့်ရှုပြီး Korean Blue house ရှေ့တွင် ဓာတ်ပုံများရိုက်ကြပါမည်။ အင်္ဂါ နေ့ ဖြစ်ခဲ့လျှင် Changdeok palace ကိုပါသွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ပြီးလျှင် ဒုန်ဒေမွန် Fashion market တွင်ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါမည်။ ညစာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ဟိုတယ်တွင် ပြန်လည်အနားယူကြပါမည်။
Option B/D - ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ကိုးရီးယား ၏ တတိယအမြင့်ဆုံး Gwongeumsung Fortress သို့ Cable Car ဖြင့်သွားကြကာ Shinheungsa ဘုရားကျောင်းနှင့် ကျေးသွန်းဘုရားကြီးသို့သွားရောက်လည် ပတ်ကြကာ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် Everland Theme park ဆက်လက်ထွက်ခွာပြီးလည်ပတ်ကြပါမည်။ ပြီးလျှင် ဒုန်ဒေမွန်း Design Plaza နှင့် fashion market ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါမည်။
Day :4Seoul & Option to choose (Breakfast, Lunch & Dinner)
Option C – ကမ်ချီများပြုလုပ်ကြပြီး ကိုးရီးယားဝတ်စုံများဝတ်ဆင် ဓာတ်ပုံများရိုက်ကြပါမည်။ ဂျင်ဇင်း များထုတ်လုပ်ရောင်းချသောနေရာသို့ သွားရောက်လေ့လာကြကာ ပြီးလျင် မိတ်ကပ်များရောင်းချသောနေရာသို့သွားကြ ပြီး မျွန်ဒုန်တွင်ဈေးဝယ်ကြပါမည်။ ထိုမှပြီးလျှင် Lotte world ရှိ Aquarium အားသွားရောက်လည်ပတ်ကြပြီး အမြင့်ဆုံးဆောက်အအုံဖြစ်သော Lotte Tower တွင်ရှိပါသည်။
Option B/D - ဂွမ်ဘွတ်ဂွန်နန်းတော် နှင့် National Folk museum တို့တွင်ကြည့်ရှုပြီး Korean Blue house ရှေ့တွင် ဓာတ်ပုံများရိုက်ကြပါမည်။ အင်္ဂါ နေ့ ဖြစ်ခဲ့လျှင် Changdeok palace ကိုပါသွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ပြီးလျှင် ဂျင်ဇင်း များထုတ်လုပ်ရောင်းချသောနေရာသို့ သွားရောက်လေ့လာကြကာ ပြီးလျင် မိတ်ကပ်များရောင်းချသောနေရာသို့သွားကြပါမည်။ မျွန်ဒုန်တွင်ဈေးဝယ်ကြကာ ကိုးရီးယား ဟာသပြဇာတ် လေးအားကြည့်ရှုကြပါမည်။ သို့ Marronnier Park သွားကာဖျော်ဖြေမှုများကြည့်ကြပါမည်။
Day :5Departure from Seoul (Breakfast & Lunch on plane)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး လေဆိပ်သို့ထွက်ခွာကာ ရန်ကုန်သို့ ပြန်ကြပါမည်။
1. International flight fare
3. လေယာဉ်ပေါ်တွင် ၁ည နှင့် ကြယ်၃ပွင့် အဆင့် ရှိ ဟိုတယ်တွင်တည်းခိုခွင့် 4ည (၂ယောက်၁ခန်း)
4. ခရီးစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသော နေရာများအား ၀င်ခွင့်နှင့်ပိုဆောင် ခ
6. ခရီးစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စားစရိတ်